90 Daqiiqadood Ayay Qoyskayga Caayayeen – Jose Mourinho Oo Faahfaahiyey Sababtii Uu Dhegta Isku Qabtay Kaddib Guusha Kulankii Juventus – Cadalool.com
90 Daqiiqadood Ayay Qoyskayga Caayayeen – Jose Mourinho Oo Faahfaahiyey Sababtii Uu Dhegta Isku Qabtay Kaddib Guusha Kulankii Juventus
Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United, Jose Mourinho ayaa xalay u dabbaal-degay guul uu aad ugu farxay oo dareenkiisa beddeshay markii ay kooxdiisu si cajiib ah uga daba-timid Juventus oo ay kaga adkaadeen 1-2.
Manchester United oo gool lagaga hor maray ayaa qaybtii dambe isbeddel samaysay markii ay garoonka soo galeen Juan Mata iyo Fellaini, waxaana gool laag xor ah ahaa shabaqa dhex dhigay Mata ciyaarta oo ay ka hadhsanayd wax ka yar 10 daqiiqadood, hase yeeshee waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray ayaa kubbad uu madaxa kusoo dhuftay Fellaini waxa iska dhaliyey difaacyahannada Juventus, waxaanay ciyaartu ku dhamaatay 1-2 ay Manchester United guushu ku raacday.
Ciyaartu markii ay dhamaatay, waxa qaab waalli ah u dabbaal-degay tababare Jose Mourinho oo dhegta midig isqabtay isaga oo la hadlayey taageereyaasha Juventus oo ku orinayey intii ay ciyaartu socotay, gaar ahaan intii ka dambaysay goolka Cristiano Ronaldo dhaliyey.
Mourinho oo u warramay telefishanka Sky Sports ciyaarta kaddib ayaa waxa uu sharraxaad ka bixiyey dabbaal-deggiisa iyo ujeeddadii uu ka lahaa ficilka uu sameeyey oo xattaa ciyaartoyga Juventus ka cadhoodeen.
“90 daqiiqadood ayay igu caayayeen inaan shaqadayda qabsaday, wax kale may ahayn. Waxa aan sameeyey tilmaan sababtoo waxaan doonayey inaan inyar oo kale oo dheeraad ah maqlo (aflagaado).” Sidaas ayuu yidhi Jose Mourinho.
Tababaraha reer Portugal waxa uu sheegay in jamaahiirta Juventus ay xattaa aflagaadeeyeen qoyskiisa, waxaanu yidhi: “Hadda ma samayn karo, waxay ahayd xilligii kulaylka ciyaarta, laakiin halkan waxaan u imid xirfadlenimo, iyaguna waxay caayeen qoyskayga, waanan u jawaabay.”
Dhinaca kale, Jose Mourinho waxa uu ka hadlay bandhig ciyaareedkii guud ee kooxdiisa, waxaanu tilmaamay inay si heer-sarraysa u ciyaareen iyagoo ka guuleystay koox gool kala hor martay.